Ny fitaovana an-dakozia dia manondro ireo fitaovana sy fitaovana napetraka ao an-dakozia na ho an'ny fandrahoana sakafo. Ny fitaovana ao an-dakozia dia mazàna dia ahitana fitaovana fanamasinana fandrahoan-tsakafo, fitaovana fanodinana, famonoana otrikaretina sy fitaovana fanodinana fanadiovana, hafanana ara-dalàna ary fitaovana fitahirizana maripana ambany. Ny sehatry ny sehatry ny lakozia ao amin'ny indostrian'ny famahanana dia mizara ho: trano fitehirizan-tsakafom-pihinana, trano fitehirizana tsy foto-tsakafona, trano fanatobiana entana maina, efitrano fanaovana sira, efitrano fanaovana mofomamy, efitrano fisakafoanana mangatsiaka, efitrano fanodinana voalohany ...
Apple, poara, voaloboka, masinina fanodinana ampongabendanitra ary tsipika famokarana dia mety amin'ny fanodinana paoma, poara, voaloboka ary ampongabendanitra. Izy io dia afaka mamokatra ranom-boankazo mazava, ranom-boankazo, ranom-boankazo, vovoka, voankazo. Ny tsipika famokarana dia ahitàna ny ascenseur Scraper, mpanadio bubble, mpanadio borosy, preheater, masinina mialoha, crusher, beater, juicer, juicer fehikibo, centrifuge volo mitsivalana, centrifuge lolo, centrafuge an'ny ultrafiltration, fitaovana filtration, resin adsorptio ...
Ny oliva, plum, bayberry, paiso, apricot, milina fanodinana plum ary tsipika famokarana dia mety amin'ny fanodinana oliva, plum maitso, bayberry, paiso, apricot ary plum. Izy io dia afaka mamokatra ranom-boankazo mazava, ranom-boankazo, pulpa tany am-boalohany, ranom-boankazo, pulp concentré, vovoka voankazo, jamam-boankazo, vinaingitra voankazo ary vokatra hafa. Oliva, plum, bayberry, paiso, apricot, milina fanodinana plum ary tsipika famokarana no tena milina fanadiovana, ascenseur, sterilizer UV, fanesorana nokleary, mpikapoka ...
Ny Blueberry, blackberry, mulberry, frezy, raspberry, bayberry mena, milina fanodinana cranberry ary tsipika famokarana dia afaka mamokatra ranom-boankazo, ranom-boasary, mifantoka amin'ny ranom-boankazo, vovoka voankazo, jamam-boankazo ary vokatra hafa. , masinina fanamarinana, ranomandry kitapo rivotra, tanky enzymolysis, decanter, ultrafilter, homogenizer, milina degassing, milina sterilization, masinina famenoana, masinina mahazatra sy kojakoja hafa. Ity ...
Izy io dia afaka mamokatra ranom-boankazo mazava, ranom-boankazo, ranom-boankazo, vovoka, voankazo. Ity tsipika ity dia misy milina fanadiovana bubble, hoist, masinina fifantina, milina fanadiovana borosy, milina fanapahana, milina mialoha, peeling sy denudation machine, crusher, belt juicer, Separator, fitaovana fifantohana, sterilizer ary milina famenoana, sns. foto-kevitra mandroso sy avo lenta ny mandeha ho azy; Ny fitaovana lehibe indrindra dia vita amin'ny vy tsy misy fangarony avo lenta, wh ...
Zava-pisotro misy karbaona ...
Zava-pisotro misy karbaona, ny akora fototra ...
Fitaovana fries frantsay frizôna: ...
Nanamboatra labiera vaovao ...
Momba ny ronono
Toe-javatra misy ankehitriny ny vokatra vita amin'ny ronono any Shina Miaraka amin'ny fanatsarana hatrany ny fari-piainan'ny olona, ​​mitaky vokatra vita amin'ny ronono avo lenta hatrany ny mpanjifa any an-toerana. Ny indostrian'ny ronono dia indostria mitombo haingana indrindra amin'ny indostrian'ny famokarana sakafo. Hatramin'ny fanavaozana ...
Momba ny ketchup
Ny firenena mpamokatra saosy voatabia manerantany dia zaraina any Amerika Avaratra, ny morontsirak'i Mediterane ary ny faritra sasany any Amerika atsimo. Tamin'ny taona 1999, ny fanodinana manerantany ny fijinjana voatabia, ny vokatra namboarina voatabia dia nitombo 20% avy amin'ny 3,14 tapitrisa taonina tamin'ny taona lasa ka ...